Ogaden News Agency (ONA) – Filim Ka hadlaya Kaalinta Halgamaga Gaar ahaan Xalimo Gobaad iyo Shugri
Filim Ka hadlaya Kaalinta Halgamaga Gaar ahaan Xalimo Gobaad iyo Shugri
Filimkan waxa loo sameyay in lagu muujiyo kaalinta halgamaga iyada oo filimkan uu sanadkan 2011 kaalinta Role Model ogaden youth uu u gartay inay qaataan labada gabdhood ee halganka aadka ugu magaca dheer waa Xalimo Gobaad iyo Shugri Ilays:
Shugri Maxamed waxa ay kaalin weyn ka ciyaartay Ruwayadii Hagardaamo Gumeysi Halgama Wax ma yeesho. Sidoo kale waxa ay hormuud u aheyd bahda ilays ee kasoo tabisa barnaamijka ilays qaarada Europe. Barnaamijka ilays oo muddo kooban socday ayaa shugri ay qeyb weyn ka geysatay. Barnaamijkaas ayaa soo jiitay 2 million oo shacab ah oo si toos ah ugu xidhna. Sidoo kale Shugri waxay ka muuqata goobaha halganka oo kaalin weyn ay ka qadata.
Xalimo Gobaad oo ah iyadu gabadha Halganka somalida Ogadeniya. Waxa ay hadiyo jeer caan ku tahay ka qeyb qadashada howlaha asaasiga u ah abaabulka iyo kor uqadida kicinta wacyiga bulshada somalida ogadeniya. Gobaad sida shugri waxay ka qeyb aheyd ruwayadi Hagardamo gumeysi iyada oo ruwayadaas u qaaday qarada Amerika. Sidoo kale Xalimo waxay ka qeyb noqotay barnaamijyo badan oo lagu soo bandhigay Wadanka USA.
Gabdhahan oo ah gabdho dadaalkooda aan halkan lagu soo koobi karin ayaa filim yar oo tilmaamaya shaqoyinka ay qabteen ay idiin soo diyariyeen bahda ilays ee hoos ka daawo.
Waxa filimkaas ku xusan eray wadamada ree galbeedka looga isticmaalo dhiiranaanta wannaaga iyo wadaniyada lagu adkaado weedhaas oo laga dhaxlay Raisal wasaraha Wadankan UK sanadkii daggaalki labaad ee adduunka, isaga oo ku tirtirsiinaya shacabkiisa in wax kasta oo wannaag ah aan laga cabsan, cadowga muuqaalkiisa weyna uusan aheyn waxa dhabta ah ama siduu u muudqo uusan aheyn. qoraalki oo Af Enlish ah kana muuqda muqalka Filimkan hoose ayaa sidan aha:
Waxaan u Hambalyeynayaa Magacaabista sanadkan loo doortay inay noqdaan Role Model of Ogaden Youth, labo gabdhood oo taariikh ku leh halganka Ogadeenya.
Waxayna Tusaale u yihiin Rajjadda iyo Mustaqbalka Gabdhaha Ogadenia ee Xornimadooda habeen iyo maalin Goobaya.
Sanadka2011- In Loo doorto Xidigaha Gobaad iyo Shugri waa GUUL iyo RAJO Wanaagsan oo ku dayasho leh.
Saxafiyadda Caanka ah ee Shugrina waxaan leenahay waanu kuu xiisnay:: Waxaana filayaa haddii alle yidhaahdo inaad mudh ka soo odhan doonto TV-Ilays oo xaruntiisa loo raray Geeska Afrika, nagana haqab tiri doono waraka iyo Wareysiyadda aadka u qiimaha badan ee aan kaaga baranay.
Waxana odhan karaa Marwo Shugri Waxay mudan tahay in Loo sharaxo Saxafiyadda sanadka ee qaaradda Afrika, ama tan kale ee CNN.tu bixiso.
Maxamed yool says:
Labada halgame ee kala ah shugri ilays iyo xaliimo gobaad iyo dhamaan howlwadeenada halganka ogadenia waxaana idin leeyahay guulaystayaal hakadaalina guushi waydhowdahay
Habalyo Labada halgame ee kala ah shugri ilays iyo xaliimo gobaad iyo dhamaan howlwadeenada halganka ogadenia waxaana idin leeyahay hambalyo guulaystayaal hakadaalina guushi waydhowdahay